1. Nacnac midabo qurux badan Dhadhan hodan Iyada oo leh maaddooyin kala duwan Laakiin markii la isku daro, waxaan ka hadlaynaa fudge. Liis menu ah oo dad badani u maleyn karaan inay adag tahay. Oo ha rabin inaad qatar gasho Laakiin xisaabta ku darso, waa menu si fudud loo sameeyo Ma doonayo oo isku murugsan Waa macmacaan carruurtu waa inay cunaan oo cunaan mar kale iyagoo aan caajis lahayn. Intaa kadib, aan wada baashaalno. Iyada oo ay weheliso habka loo sameeyo fudge ee qof kastaa samayn karo Dhab ahaantii, macmacaanka fudge oo leh muuqaal jilicsan oo dibedda ah oo jilicsan gudaha Iyada oo isku dar ah shukulaato iyo caano Waxaa loogu yeeri karaa qaabdhismeedka macmacaanka, muuqaalka muuqaalka fudge Tani waxay ku siin doontaa dhadhan jilicsan oo jilicsan, oo lagu qariyey dhadhan shukulaato macaan, oo lagu daray fudge dhab ah, ma jiro geeddi-socod adag iyo walxo. Waa macmacaan caruurtu aad ujecelyihiin uguna jecelyihiin. Intaa ka dib, aan diyaarinno maaddooyinka. Maaddooyinka iyo qalabka fudud, laakiin dhadhanka ayaa ah mid aan caadi ahayn.
2. Fudge waa nooc macaan oo sax ah? 1 gasac oo caano macaan ah (14 oz)
3. 3 koob oo ah Chips Chocolate Chocolate
4. Ku buufi saliida cuntada ama subagga
5. Maqaar casri ah
6. Saxanka shukulaatada
7. Warqad Freud
8. Sida loo sameeyo fudge, macaan, dhegdheg dhegta leh • Ku shub caanaha macaan ee dhalada lagu diyaarshay • Ka dib Chips Chocolate Chocolate ku rid weelka • Kadib isku walaaq maaddooyinka. Waxaa lagu ridayaa microwave kuleylka badan Waxay qaadataa qiyaastii 1 daqiiqo. • Ku jar jar warqadda 'Freud' saxanka keega ee la diyaariyey. Ka dib buufi saliidda khudradda ama mari subag aan cusbo badnayn. Si shukulaatada aysan ugu dheganeyn freud si ay u fududaato ka saarideeda.
9. • Kadib shukulaatada ku shub digsiga diyaarsan ama caaryada. Isticmaal ladle si aad wajiga u masaxdo si siman. Kadib isku walaaq geli qaboojiyaha ilaa 2 saacadood ilaa ay gebi ahaanba qaboojiso.
10. • Marka la qaboojinayo ilaa 2 saacadood, ka saar caaryada. Kadib waa lagaa saaray, jarjar baararka laba jibbaaran, ama jarjar cabbirro qaniinyo leh markii loogu adeego sonkorta ukun. Ama sonkor yar oo flake ah Si aad u sameyso dhadhanka macaan, ku dheji dusha sare ee fudge. Kaliya kan waa macaan Fudge waa cunto fudud oo horey loogu diyaarin karo xafladda. Maxaa yeelay waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha Gaar ahaan xafladaha carruurta leh ama sida saxanka macaan cashada kadib. Taasi waxaa loo soo qaaday si loogu adeego fudud iyo dhadhan jajab ah Ama si loogu adeego martida inta lagu jiro kal-fadhiyada kafeega iyo shaaha, kuwaas oo la jaan qaada ku dhowaad dhammaan noocyada cabitaannada kulul Intaa waxaa dheer, inaad awood u yeelatid inaad adigu sameyso waxay sidoo kale ku dari kartaa dhadhan iyo faa'iidooyin laga helo miraha oo dhan, lowska ama miraha la qalajiyey. Ka dhig fudeyd u gaar ah waxyaabaha ku hareeraysan, ka dibna aan ka dhigno fudge qaboojiyaha martida ama xafladaha !!